BlueStacks4အခမဲ့ download လုပ်ရန်၎င်းသည်လုံခြုံပြီးတရားဝင်ဖြစ်ပါသလား။ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Jesus Sanchez | | အစီအစဉ်များ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ဂိမ်း PC အတွက်နာမည်ကြီး Android emulator ဖြစ်သည့် BlueStacks ဟူသောအမည်သည်သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လာမယ့်ပို့စ်တွင်သင့်ကိုပြလိမ့်မည် BlueStacks4အခမဲ့ download လုပ်နည်း။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိမရှိ၏ကိစ္စသို့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ် သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် emulator ကို install လုပ်ခြင်းသည်လုံခြုံပြီးတရား ၀ င်သည်။
1 emulator ဆိုတာဘာလဲ။
2 အပြာရောင်လေးများ 4
2.1 BlueStacks4ကိုဘယ်လို download လုပ်မလည်း
2.1.1 BlueStacks4ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
2.2 BlueStacks အတွက်အနည်းဆုံး system လိုအပ်ချက်များ 4
2.3 BlueStacks အတွက်လိုချင်သောနှင့်အကြံပြုထားသောစနစ်လိုအပ်ချက်များ 4
2.4 Mac ပေါ်မှာ BlueStacks4ကို download လုပ်လို့ရပါသလား။
3 BlueStacks4ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလား။
3.2 အကယ်၍ သင်သည် emulator ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုလျှင်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြုလုပ်ပါ
3.3 သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုစိုးရိမ်မှုများမရှိဘဲ BlueStacks နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
3.4 သင်၏ PC သည်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက BlueStacks ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်
4 ဂိမ်းအားလုံးကိုကစားရန် BlueStacks ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရားဝင်ပါသလား။
5 BlueStacks4အသုံးပြုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဖျက်နိူင်ပါသလား။
ဒီအကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝမလေ့လာခင်၊ emulator ဆိုတာဘာလဲမသိသူများအတွက်၊ သင်၏သံသယများကိုဖြေရှင်းရန်လိုင်းအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းပါမည်။ emulator တစ်ခုသည်ရိုးရိုးလေးသာဖြစ်သည် Android mobile မှာကစားခဲ့ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာကို virtual machine တစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုမှတဆင့်Smartရာမစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Android emulators တွေအများကြီးရှိတယ်။ BlueStacks 4, MeMu Player, Bluestacks, Nox App Player သို့မဟုတ် Andy Emulator တွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်အတုခိုးခြင်းဖြစ်သည် BlueStacks ၄ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘယ်လိုအခမဲ့ download ဆွဲမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။
BlueStacks4သည်ရပ်ရွာလူထုမှ PC အတွက် Android emulators တွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းဂိမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာဖြင့်ကစားနိုင်သည် ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်။ ထို့အပြင်၎င်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် Windows နှင့် Mac အတွက်အခမဲ့ download။ ထို့အပြင် BlueStacks ကိုပေါင်းစပ်ထားသည် Google Play၊ ဒါကြောင့်ဒီကနေသင်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
BlueStacks4ကိုဘယ်လို download လုပ်မလည်း
emulator ကို download လုပ်ရန်, ငါတို့ရိုးရှင်းစွာ must သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ ပရိုဂရမ်၏ download နှင့် installation ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
BlueStacks4ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
မသန်စွမ်း download, Bluestacks, ငါတို့ရပါမည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ.
emulator ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့က၎င်း၏ installation ကို execute ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် installation ၏ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာသည်။
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂူးဂဲလ်အကောင့်ထဲကိုဝင်ပါ အကောင့်များစည်းညှိခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
ကျနော်တို့ emulator ကိုဖွင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ် ငါတို့ရဲ့ PC မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Android application အားလုံး။ ငါတို့လိုချင်တဲ့ဂိမ်းကို download, download, install ။
BlueStacks အတွက်အနည်းဆုံး system လိုအပ်ချက်များ 4
အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များသည်မြင့်မားခြင်းမရှိသောကြောင့်သင့်အနေဖြင့် NASA ကွန်ပျူတာရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ အောက်မှာကြည့်ကြရအောင် -
OSWindows7(သို့) ထိုထက်ပိုသည်။
Processor ကို: Intel or AMD
ရမ်: အနည်းဆုံး RAM ကို4GB ။
HDD သို့မဟုတ် hard disk:5GB နေရာလွတ်ရှိသည်။
BlueStacks အတွက်လိုချင်သောနှင့်အကြံပြုထားသောစနစ်လိုအပ်ချက်များ 4
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း၊ emulator ကိုထောက်ပံ့ရန်နိမ့်ကျသောစနစ်လိုအပ်ချက်များသည်မြင့်မားသည်မဟုတ်သော်လည်းသင်သည်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုခံစားလိုပါကသင်၏စနစ်သည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိရမည်။
OSWindows 10 (သို့) ထိုထက်ပိုသည်။
စက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ဗိသုကာ - 64-bit
Processor ကို: Intel သို့မဟုတ် AMD Multi-Core ။
PC ပေါ်တွင် Virtualization ကို Enable လုပ်ပါ။
ဂရပ်ဖစ်: Intel HD 5200 (PassMark 750) သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်
ရမ်: RAM 8 GB ။
HDD: SSD နှင့်သိုလှောင်ရန် hard disk နေရာ - 40 GB ။
Mac ပေါ်မှာ BlueStacks4ကို download လုပ်လို့ရပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Android BlueStacks emulator ကိုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် မက် နှင့် Windows ကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ La Manzanita ကိုအသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင် download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
BlueStacks4ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလား။
ဒီတော့ဒီဆော့ဗ်ဝဲ (သို့) emulator ကိုသင့်ရဲ့ PC မှာတပ်ဆင်ခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းပေါ်လာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလက်ကိုင်ဖုန်းတွေမှာကစားဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဂိမ်းကိုကစားတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ငါကစားနိုင်မှာလဲ။ ကွန်ပျူတာလား
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်မှ၊ BlueStacks သည်စိတ်ကြိုက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်စိတ်ချရသော၊ Malware၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ခိုးမှုနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဒေတာကာကွယ်မှု၊
ဟုတ်ပါတယ်, BlueStacks ဖြစ်ပါတယ် လုံးဝတရားဝင်။ အခြား Nintendo emulators, GameBoy သို့မဟုတ် Gamecube နှင့်မတူဘဲ BlueStacks4သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်မူဝါဒကိုချိုးဖောက်မထားဘူး။ BlueStacks4သည် Android Play နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် Google Play စတိုးပါဝင်ရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် emulator ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုလျှင်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြုလုပ်ပါ
၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ဤပရိုဂရမ်အမျိုးအစားကို၎င်းတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမဟုတ်ဘဲ third-party စာမျက်နှာများမှဒေါင်းလုပ်ချသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလိုအပ်သောအနaတရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေသည် ဗိုင်းရပ်စ်, စပိုင်ဝဲ (သို့) malware ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ပေါ်မှာငါတို့မယူဆသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရပါမည်သည့်အခါအတူတူပင် actualizar အမြဲတမ်းတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ
သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုစိုးရိမ်မှုများမရှိဘဲ BlueStacks နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအသုံးအများဆုံးသံသယများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အား BlueStacks4နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်သေချာနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ BlueStacks ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဒီအရေးယူမှုလုံးဝလုံခြုံကြောင်းသေချာပါစေPlay Store ကို ၀ င်ရန်သင့် account အားတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ပြproblemsနာမရှိပါ။
သင်၏ PC သည်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက BlueStacks ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်
စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများသည် BlueStacks4ကဲ့သို့သော emulator များနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အကြောင်းမှာသုံးစွဲသူများစွာသည် emulator ကို run သောအခါ၊သင့်ကွန်ပျူတာနှေးနေပြီး PC အရင်းအမြစ်များနှင့် RAM အမြောက်အများကိုစားသုံးနေသည်။ BlueStacks တွင် CPU နှင့် RAM အသုံးပြုမှုမြင့်မားသော်လည်းသင့်ကွန်ပျူတာတွင်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် malware ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ဂိမ်းအားလုံးကိုကစားရန် BlueStacks ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရားဝင်ပါသလား။
ငါတို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း BlueStacks သည်လုံးဝတရားဝင်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်အကြပ်အတည်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းတီထွင်သူတွေကအဲဒီလိုပဲထင်ကြသလား။ အဖြေကမရှိဘူး။ ဤသည်ဗီဒီယိုဂိမ်း developer ၏အမှုဖြစ်ပါတယ် SuperCell၊ Clash Royale သို့မဟုတ် Clash of Clans ကဲ့သို့ကျော်ကြားသည်။
ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်Clash Royale ကိုကစားရန် emulator များအသုံးပြုခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ဖြစ်စေ၊ SuperCell မှအကြံပေးသည် -
ငါတို့ကသူတို့ကိုသွားလျှင် Royale သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ, ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါသတင်းစကားကိုဖတ်နိုင်သည်အောက်ပါလိုင်စင်ကန့်သတ်ချက်များအားဖောက်ဖျက်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်အသုံးပြုမှုကိုမဆိုလုံးဝတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ ထိုသို့သောချိုးဖောက်မှုသည်သင်၏ကန့်သတ်ထားသောလိုင်စင်ကိုချက်ချင်းရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်နောက်ဆက်တွဲတာ ၀ န်ရှိသည်။
သောကြောင့်, အားနည်းချက်၊ အားနည်းချက်၊ အလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စိတ်ကြွဆေးများ၊ bot များ၊ hacks များ၊ mods များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ Supercell ဂိမ်းများ၊ သို့မဟုတ် Supercell ၏အတွေ့အကြုံဂိမ်းများကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောတတိယပါတီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်း (တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ) အသုံးပြုပါ။ , ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုပိတ်ပင်ထားသည်ဟုသင်ယူဆနိုင်သည်။
BlueStacks4အသုံးပြုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဖျက်နိူင်ပါသလား။
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် emulator တွင်ကစားလျှင် SuperCells သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုဖျက်နိုင်ပါသလား။ အဖြေမှာ ဟုတ်တယ်၊။ ဒါကသူတို့လုပ်မယ်လို့ဆိုလိုတာလား။ ရိုးသားစွာဖြင့် ငါတို့မစဉ်းစားဘူး emulators နှစ်ပေါင်းများစွာပတ်ပတ်လည်ရှိ။ , ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်တားမြစ်ချက်ကိုသင်တွေ့ရခဲသည်။
ဤသည်မှာဂိမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများတွင်ပါ ၀ င်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် SuperCell သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်ကစားရန်စိတ် ၀ င်စားသည်မှာထင်ရှားသည်။ အကြောင်းမှာဤဂိမ်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်တတိယပါတီမှဖန်တီးထားသော application တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရရင် BlueStacks4ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ Android emulator တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကသုံးစွဲသူများကသိကြတာပါ။ ဒါ့အပြင်ဒါကလုံးဝတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမခံကိုရယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရမည် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို developer ကသူတို့၏ဂိမ်းများတွင် emulator များအသုံးပြုခြင်းကိုအတည်ပြုခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသောထိုဂိမ်းများ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အစီအစဉ်များ » BlueStacks4ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
Dainel Suarez Robledo ဟုသူကပြောသည်
Dainel Suárez Robledo အားပြန်ပြောပါ